December 4, 2017 - Nepali Sajha
Published on December 4, 2017 in नेपाली by Nepali Sajha
Sponsored Link: निर्वाचनलाई लक्षित गरी सीमा नाका सिल विराटनगर, मंसिर १९ गते । आगामी मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आज बिहानदेखि नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएका मोरङका सीमा नाका सिल गरिएको छ । यही बिहीबार हुने निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले भारतसँग जोडिएको मोरङको ४२ किलोमिटर सीमा नाकालाई सिल गरिएको…
Published on December 4, 2017 in Latest by Nepali Sajha
Sponsored Link: Bharatpur, December4Sanjay Gurung, who was arrested on November 28 for carryingagas cylinder in Ratnanagar Urban Municipality of Chitwan to trigger an explosion, told police that he was merely carrying out anti-poll elements’ order forasum. According to Chitwan Superintendent of Police Deepak Thapa, Gurung told police that he…
Sponsored Link: भनिन्छ, राजनीति क्रुर हुन्छ। एकसे एक शक्तिशालीलाई पनि यसले बीच सडकमा ल्याएर पछार्ने तागत राख्छ। २०६५ सालमा यस्तै भयो। त्यसको ४ वर्षअघि सेनाको आडमा राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’मार्फत शक्ति हत्याएका थिए। उनले नेताहरुलाई थुनामा हाले, सञ्चारगृहमा सेना पठाएर सम्भावित विरोधको मुख थुने। नागरिकका इन्टरनेट र फोन सम्पर्क काटे। समर्थकलाई सडकमा उतारे। दिपावली गर्न लगाए।…
Sponsored Link: १८ मंसिर, काठमाडौं । गुन्युचोलीमा सजिएकी युवतीको तस्वीर डा. बाबुराम भट्टराईकै ब्यानरको एक छेउमा देखिन्छ ।सडकमा यी युवती पनि अन्य उम्मेदवारहरुजस्तै माला र खादा लगाएर भोट माग्न व्यस्त भइन् । तर, यिनी महिला उम्मेदवार होइनन् र पुरुष उम्मेदवार पनि होइनन् । चुनावमा उनको एजेण्डा नै यस्तो रहेछ कि संसदमा पुरुष र महिलाको परीक्षण…
बम आक्रमणपछि पट्टी बाँधेरै आम सभालाई सम्बोधन गरे थापाले (हेर्नुहोस् Live भिडियो )
Sponsored Link: चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा बम विष्फोटबाट घाइते भएका काङ्ग्रेस नेता गगन थापा घटना भएको केही घण्टामा नै चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका छन्। सिफलमा आयोजना भएको काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ र ६ को संयुक्त चुनावी सभालाई साझ ७ बजेपछि थापाले सम्बोधन गरेका हुन्। सम्बोधन गर्दै उनले आफू पछिल्लो संसद समस्या देखाउने, उत्तेजना फैलाउने …